Ukoyika Ubumnyama ngu-Iron Maiden - Izinto Zobugcisa
Ukoyika Ubumnyama ngu-Iron Maiden
Le ngoma imalunga nendoda ephazamisayo ehlala esoyika ukuba kukho umntu okanye into eza kuphuma kuye ebumnyameni ngenxa yokubukela iifilimu ezoyikisayo kunye nokufunda ubugqi. Imixholo enjengale ivela ubukhulu becala lobugcisa beMaiden (jonga: 'Ingcwele,' 'Abafazi kwiYunifomu,' 'Intombi yentsimbi,' 'Zisa intombi yakho ekuxhelweni' njlnjl.).
I-albhamu, uninzi lwabo olucinga ukuphucuka okukhulu kune-albhamu yangaphambili ye-Maiden, Akukho Mthandazo Wokufa , yavela kwiitshathi zase-UK kwi # 1.
Iingoma ezintathu kwi-albhamu zakhutshwa njengezodwa. 'Khawuleza okanye Ufile' itshathi ephezulu, kwi # 2.
Kude kube Ihlabathi elitsha elinenkalipho yakhululwa ngo-2000, le yile albhamu yokugqibela ye-Iron Maiden ukuba ibonise uBruce Dickinson njenge-vocalist.
I-albhamu yayiyeyokuqala kaMaiden ebonisa ubugcisa bokugquma obungacwangciswanga nguDerek Riggs, kodwa endaweni kaMelvyn Grant. Ngokucacileyo iiRiggs ziyile ubugcisa bokugubungela, kodwa yaliwa ngenxa yeGrant, ke uphawu lwe-D / R alufumaneki ndawo. Ubugcisa bokumboza buye bathandwa kwaye bubonisa umoya womthi obizwa ngokuba yi-driad. Umthuki-rocker uMarilyn Manson ukhe wazama ukuzizobela ngokwakhe.
I-Nyctophobia ligama lenzululwazi lokoyika ubumnyama. Kuhlala kubonwa rhoqo kwiintsana nakubantu abadala abaninzi.
Le ngoma ivela kumdlalo wekhompyuter we-Iron Maiden U-Ed Hunter . Idlala ngexesha leNqanaba 4, amangcwaba.
Abanye bakuthathela ingqalelo oku kulandelwa 'kokubulala eRue Morgue' kunye 'nokuGxothwa okungenacala,' ekwajongana nendoda ephazamisayo neyothusayo. Kwezo ngoma, wayebaleka emthethweni emva kokutyholwa ngobuxoki ngokubulala.
Ukhenketho luka-1992 'loloyiko lobumnyama' lwalubandakanya ukubekwa phambili kwebhendi kwiMonsters of Rock festival eyaphoswa kwiNqaba iDonnington (okwesihlandlo sesibini). Ikhonsathi yarekhodwa kwaye yakhutshwa njengealbhamu I-Iron Maiden ihlala eDonnington , esele iprintiwe kwaye kunzima kakhulu ukuyifumana.
Oku kuqhuba u-7: 16.
Kerrang! ngelixa wenza udliwanondlebe nemvumi uBruce Dickinson, wayecaphula i-biography ye-Iron Maiden Balekela kwiiNduli , apho uSteve Harris athi uBruce 'wenze umzamo omncinci kakhulu' kuloyiko loKhenketho oluMnyama. Impendulo kaBruce: 'Ndinenguqu yam yeziganeko kwaye naye unayo. Konke kuza kwindlela olibona ngayo ihlabathi. KuSteve, eyona Ntombazana ibaluleke ngaphezu kwayo nayiphi na into. Kum, kukho izinto ezithile ezibaluleke ngaphezu kwebhendi endikuyo. Bendingazi ukuba izakuba yinto enkulu kangaka xa ndihamba, kodwa kanye xa ndiphuma abaphulaphuli bendicinga ukuba 'Sh **! Ukuba ndibaleka ndikhonyuluka njengesidenge, abaphulaphuli baya kucinga, 'Yeyiphi i-wanker! Ukuba wonwabile, kutheni emka? '.' Kwaye ukuba ndibhadula ndijongeka ndonwabile njengesono, bayazibuza ukuba kutheni behlawule i- $ 20 ngetikiti lokubona le tosser. Ndandixakiwe. Ngobunye ubusuku abaphulaphuli babenenzondelelo. Kwakungathi ukwenza igig ekuvukeni! Ngobunye ubusuku bendibonwabile, kodwa kwabanye bendicinga, 'Akwaba bendingekho!'. Okwangoku ndishiya iMaiden ndenza isivumelwano nam ukuba andizukuyenza into endingakholwanga yiyo. USteve nam sihlala sihlala singqubana. Wayefuna ukundigxotha emva kwenyanga yokuqala yohambo 'lwenani lezilwanyana' -kuba ndandiqhubeka nendlela yakhe! Ndineesentimitha ezintandathu ezongezwe kwisiseko semakrofoni ukuze ndikhubeke! Ndiye ndadikwa ndimile phambi kwam xa ndicula. Zonke ezi chips ndizifake emazinyweni akhe apho ebehlala endiqengqa khona. Emva kwegig eNewcastle ngo-'82 sasizakuphumela ngaphandle, imikhono yasongwa. Kodwa safunda ukuhlala kunye. Kwaye ukuba uSteve wayengenabo obo buntu, uMaiden ngewayengazange abekho. '
Kuba abalandeli abaninzi babegculele Akukho Mthandazo Wokufa kwaye Uloyiko lobumnyama Njengama-albhamu eMaiden angaphantsi, uBruce Dickinson wabuzwa kudliwanondlebe: 'Ndicinga ukuba wonwabe kakhulu ngoku kunama-albhamu ambalwa okugqibela avela kwi-Iron Maiden?' Impendulo yakhe: 'Hayi, andizukuya ndawo kwaye ndiqale ukwenza izimvo ngeMaiden nangezinye izinto. Kukho intlonipho enkulu phakathi kwabafana baseMaiden kunye nam kunye nam nabafana baseMaiden. Andiyi apho. ' Uye wenza, nangona kunjalo, uyavuma ukuba wazama ukwenza isandi esahlukileyo kwii-albhamu zakhe ezizodwa kwaye wayonwabile sisiphumo.
IBrett-Edmonton, Canada, ngako konke okungasentla
ndide ndikubone ukukhanya emehlweni akho
ukuba andinakuba nawe andifuni mntu womculo lyrics
nkosana akufuneki ube sisityebi lyrics
iintloko zokuthetha -kumele ukuba yile ndawo
Ndikufumene phantsi kolusu lwam intsingiselo